Ugu horreyn 12,9-inch iPad Pro ah ka dibna 16-inch MacBook Pro oo leh shaashadda OLED | Waxaan ka socdaa mac
Marka hore 12,9-inch iPad Pro, ka dibna 16-inch MacBook Pro oo leh bandhig OLED
Waxay u muuqataa in ka hor intaan la helin MacBook Pro ugu horreeya oo leh shaashadda '16-inch OLED', Apple wuxuu bilaabi lahaa iPad Pro oo leh guddiga noocan ah. Sida lagu sharaxay MacRumors ka DigiTimes dhexdhexaad caan ka ah waxaa la sheegay in iPad Pro iyo 16-inch MacBook Pros oo leh nuucaan noocan ah ayaa lagu sii deyn karaa 2022.
Sida lagu sharraxay warbixinta, waxa ugu amniga badan ayaa ah kii ugu horreeyay ee qaadashada shaashadda noocan ahi waa iPad-ka 10,9-inji ah oo laga yaabo inuu yahay hawo-mareenka. Ipadyadan ugu horeeya ayaa laga yaabaa inay yimaadaan dabayaaqada sanadkan ama horaanta sanadka soo socda.
Macbook Pro wuxuu la socdaa OLED sanadka 2022
Weli waa warar kale oo xan ah laakiin wax walba waxay muujinayaan in kumbuyuutarradan lagu fulin doono Macs laga bilaabo sanadka soo socda 16-inji ama xitaa 17-inji qalab. MacBooks waxay leeyihiin muuqaal Retina ah oo runtii wanaagsan laakiin aan shaqo ku lahayn OLED.
Shaashadaha yar-yar ee loo yaqaan 'LED-yada yar' ayaa sidoo kale qayb ka ah wararka la isla dhexmarayo ee sheegaya in la beddelayo shaashadda iPad-ka iyo Mac-da iyo sida ay qortay DigiTimes labada nooc ee shaashadaba way wadaagi karaan masraxa inta lagu jiro xilliga soo socda. Waan arki doonaa waxa dhaca aakhirka.
Apple, sida aan wada ogsoonahay, waxay ku hirgalisay shaashaddii ugu horreysay ee OLED qalabkeeda Apple Watch oo hadda iPhone-ka sidoo kale wuu leeyahay. Waxaa la filayaa in arrimuhu ay sii socon doonaan illaa ay ka gaaraan aaladaha intiisa kale laakiin macno ahaan waa inaad samir yeeshaa waana taas Apple marka laga hadlayo isbeddelada noocan ahi way gaabis yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Marka hore 12,9-inch iPad Pro, ka dibna 16-inch MacBook Pro oo leh bandhig OLED
Apple wuxuu furayaa degel ku takhasusay qaabeynta qalabkiisa kuwa yaryar
Counterpoint mar kale waxay u taagtaa Apple Watch inay tahay midka ugu iibinta badan smartwatch